Diabe Mitaky ny Tany, ny Rariny ary ny Zon’Olombelona Ataon’ny Kambodziana Na Dia Eo Aza Ny Fanakatsakanan’ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Desambra 2015 6:48 GMT
Tonga tao amin'ny renivohim-paritany Chbar Morn ny vondrona ao Kampong Speu. Fitakiana ara-politika mibahan-toerana ao Kambodza ny olan'ny zon'ny fananan-tany ao. Sary avy amin'ny Licadho, vondrona mpiaro ny zon'olombelona.
Kambodziana an'arivony manerana ny firenena no manao diabe mizotra mankany an-drenivohitra Phnom Penh hankalaza ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Zon'olombelona omaly 10 Desambra. Nobahanan'ny polisy tao amin'ny faritany maromaro ny sasany tamin'ireo mpikatroka ary efa noraràn'ny governemanta sahady ny fihetsiketsehana ao Phnom Penh, saingy mbola mitohy ny diabe mba hisarihana sy hahazoana fanohanana avy amin'ny vahoaka.
Ny diabem-pihetsiketsehana, izay nanomboka tamin'ny 6 Desambra tao amin'ny faritany 12 dia mikendry hanasongadina ny lohahevitra momba ny rariny amin'ny fotoanan'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona. Ny drafitra tany am-boalohany dia ny hampahafantatra ny fanangonan-tsonia ahitana fitakiana dimy alefa any amin'ny fitondram-panjakana:
- Ho fitadiavam-bahaolana amin'ny adin-tany;
– Fanavaozana ny rafi-pitsarana sy famotsorana ireo mpikatroka sy mpiaro ny zon'olombelona;
– Fiakaran'ny karama farany ambany sy fanajana ny zon'ny mpiasa;
– Fampitsaharana ny herisetra tohanan'ny fanjakana; ary
– Fanajana ny fahalalahana maneho hevitra, hiditra fikambanana ary fivoriana am-pilaminana.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, namindra toerana tantsaha, vondrona teratany, sy mponina an'arivony ny adin-tany noho ny tetikasa fampandrosoana sy famarotana tany midadasika. Voampanga ho nampiasa herisetra ny governemanta tamin'ny fandroahana ireo mponina tao an-tranon'izy ireo. Anisan'ireo tantsaha Kambodziana manao diabe mizotra ankehitriny ho ao an-drenivohitra ny sasany tamin'ireo niharam-boina tamin'ity fanitsakitsahana ny zo hanan-tany ity.
Mandritra izany, mampiseho ny toerana fadiranovana iainan'ireo mpiasa ao amin'ny firenena ny fitakiana fisondrata- karama farany ambany. Hatramin'ny herintaona, nanatontosa fitokonana sy karazana fihetsiketsehana hafa ireo mpiasa mpanamboatra akanjo mba hitaky fisondrota-karama amin'ny karaman'izy ireo farany ambany isam-bolana, izay anisan'ny ambany indrindra ao amin'ny faritra Azia Atsimo Atsinanana.
Ny fankalazana ny zon'olombelona tamin'ity taona ity dia manan-danja ara-politika ihany koa satria voampanga ho manenjika ny mpanohitra sy ireo hafa mpanakiana ny governemanta ny antokon'ny fitondrana, izay teo amin'ny fitondrana nandritra ny telopolo taona mahery sahady. Famantarana ny fihenjanana ara-politika ny fanapahan-kevitra mandrara ny fihetsiketsehana ao amin'ny kianjan'ny fahalalahana ao an-drenivohitra.
Saingy na dia eo aza ireo fanamby ireo, mitohy ny diabe ho an'ny tany, ny rariny, ary ny zon'olombelona. Ireto ambany ireto sary sasany nalaina tao amin'ny faritany maro tao Kambodza misy ireo mpikatroka eny ifotony mampijoro ny zon'izy ireo hankalaza ny Andro Iraisampirenena ho an'ny zon'olombelona:
Nandany ny alina tao Tropeangkun pagoda, distrikan'i Samrong Tong ny mpanao diabe. Mikendry hipaka ao Phnom Penh, renivohi-pirenena ny diabe. Sary avy amin'ny Licadho, vondrona zon'olombelona.
Nandefa fanangonan-tsonia roa tany amin'ny governemantam-paritra Koh Kong ny vondrona: ny iray miantso ny governemanta mba hanaja ny zon'olombelona, ny iray hafa miantso ny famotsorana ireo mpikatroka telo mandala ny tontolo iainana. Mitarika ny fanentanana manohitra ny volavola hanangana tohodrano hakana herinaratra ao Areng Valley ireo mpikatroka voasambotra ireo. Sary avy amin'ny Licadho, vondrona mpiaro ny zon'olombelona.
Fiarahamonina eny ifotony ao amin'ny faritany Koh Kong manao diabe ho fankalazana ny Andron'ny Zon'olombelona, lohahevitra “Rariny”
Tao Banteay Meanchey, olona teo amin'ny 600 teo no nanatevin-daharana ny filaharamben'ny traktera sy tuk tuk (fiara kodiaran-telo mahazatra) nanomboka tao Poipet hatrao amin'ny biraon'ny governemantam-paritra ao an-tanànan'i Banteay Meanchey. Sary avy amin'ny Licadho, vondrona mpiaro ny zon'olombelona.
Mpikatroka manamory tuk tuk (fiara kodiaran-telo mahazatra) mba hamonjy ny Sarivongan'ny Dragona ao Battambang izay anaovan'izy ireo fandaharam-potoana hiresahana ny olan'ny zon'olombelona. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'i Ridan Sun
Olona 700 teo ho eo tao Kampong Chhnang no nitondra marionety goavana mba hanehoana ny zo, ny fahafahana ary ny vintana tsara ho an'ireo mpanao diabe rehetra. Sary avy amin'ny Licadho, vondrona mpiaro ny zon'olombelona.